Ungayikhetha kanjani ipayipi le-ABS nepayipi le-PVC
Umehluko nokuqhathanisa phakathi kwe-ABS ne-PVC Kunabakhiqizi bamapayipi bezinto ezahlukahlukene emhlabeni jikelele, futhi omunye wabo akayona ingcono kunenye. Ngemuva kwakho konke, zinomphumela ofanayo ncamashi. Vele, lapho uhlinzeka abantu ngamanzi amasha futhi uletha amanzi angcolile ekuthungeni ...
Okwesibili, umehluko phakathi kwepayipi le-pvc nepipe ppr
Umehluko phakathi kwepayipi le-PPR nepayipi le-PVC uqinile, ngakho-ke ubukhulu bepayipi ububanzi yisisekelo, kepha okubalulekile kwalokhu kukhonjwa kufanele kube nakho. Okokuqala, kufanele ujwayelane nemvelo yepayipi futhi okungenani ube nomuzwa. Kulokhu, ngemuva kwesikhathi eside ...
Ngabe amapayipi e-pc namapayipi e-pvc ayalingana ekuhlobiseni? Uyini umehluko phakathi kwe-pc tube ne-pvc tube？
Ingabe i-pc tube iyefana nethambo le-pvc? Uyini umehluko phakathi kwe-pc tube ne-pvc tube? Ngikholwa ukuthi abanikazi abaningi bomhlobiso badidekile ngalokhu, ngakho-ke namuhla imboni yezobuchwepheshe bezokwabelana izokwabelana ngokwethulwa kwepayipi le-pc kanye ne-pvc kuwo wonke umuntu, ake sibheke! 1 ...